Madaxa Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa khamiistii sheegay in xaaladda cimilada ee hadda jirta ay tahay “tigidh hal dhinac ah oo masiibo ah” - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Madaxa Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa khamiistii sheegay in xaaladda cimilada ee...
Madaxa Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa khamiistii sheegay in xaaladda cimilada ee hadda jirta ay tahay “tigidh hal dhinac ah oo masiibo ah”
Heshiiskii Paris ee isbeddelka cimilada ee 2015, oo lagu daray shirka COP21, ayaa lagu baaqay in hoos loo dhigo kuleylka adduunka oo aad uga sareeya 2C oo ka sarre maray heerkii warshadaha ka hor, oo ay tahay in dib loogu celiyo ku dhowaad 1.5C.
Laakiin qiyaasaha Qaramada Midoobay ee hadda waxay muujinayaan kulayl “masiibo ah” oo ah 2.7C inuu jiro.
Guterres wuxuu sheegay in tilmaamaha hadda jira “ay muujinayaan waddo uu ku gaadhay ugu yaraan 2,7C kulaylku taasoo ka sarreysa heerarkii hore ee warshadaha, taasina sida iska cad waa tigidh hal dhinac ah oo musiibo ah.”
Wasakhaynta kaarboonka ee dalal faro-ku-tiris ah ayaa jilbaha u dhigay nolosha bani-aadamiga waxayna leeyihiin mas’uuliyadda ugu weyn, ”ayuu ku yiri shir jaraa’id oo online ah oo uu la yeeshay xubno ka tirsan mashruuca caalamiga ah ee Daboolidda Cimilada.
“Waxaan rajaynayaa inaan wali ku jirno waqtigii loogu talagalay inaan ka fogaano guul-darrada Glasgow, laakiin waqtigu wuu yar yahay, oo arrimuhu aad bay u sii adkaanayaan waana sababta aan aadka ugu walaacsanahay. Waxaan ka baqayaa inay wax khaldamaan,” ayuu yidhi .
“Hoggaamiyeyaasha G20 waxay ku kulmi doonaan Rome waxayna og yihiin in dhaqaalahoodu mas’uul ka yahay shan meelood afar wasakheynta meeraha ee kaarboonka lagu siidaynayo,” ayuu yiri Guterres.
“Haddii aysan istaajin … waxaan u soconnaa dhibaatooyin aad u xun oo aadanaha ku soo fool leh,” ayuu raaciyay.
Wuxuu yiri: “Shiinaha iyo Mareykanku waa inay sameeyaan wax ka badan wixii ay ku dhawaaqeen.”
Waxaa la qabtay intii u dhexeysay Oktoobar 31-keedii ilaa 12-kii Nofembar, isu imaatinkii Glasgow waxaana loo arkayey tallaabo muhiim u ah dejinta bartilmaameedyada qiiqa adduunka si loo yareeyo kuleylka adduunka.
Previous articleKa hor doorashada 24 -ka Diseembar , Liibiya ayaa khamiistii marti-gelisay saraakiil sare oo ajnabi ah si looga taageero amuuraha qallafsan ee hadda horyaalla waddanka.
Next articleNnamdi Kanu oo ah nin gooni u goosad ah oo u dhashay dalka Nigeria ayaa diiday inuu wax danbi ah ku leeyahay..